ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်(ဇိုမီး)အဖွဲ့က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့(Gal Hang Pah Tawi Na Award) ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား ချင်းပြည်နယ်တီးတိန်(ဇိုမီး) အဖွဲ့မှ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လာရောက်တွေ့ဆုံ၍ ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award)အား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်သည်။
ခငျြးပွညျနယျ၊ တီးတိနျ(ဇိုမီး)အဖှဲ့က တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျအား ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့(Gal Hang Pah Tawi Na Award) ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျအား ခငျြးပွညျနယျတီးတိနျ(ဇိုမီး) အဖှဲ့မှ ကကျသလဈခရဈယာနျဘုနျးတျောကွီး Rev. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung ဦးဆောငျသညျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ၊ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌လာရောကျတှဆေုံ့၍ ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award)အား ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ပေးအပျသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ဘက်စုံ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစခန်းသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး